सानिमा बैंकको खुद नाफा ३०.७५ प्रतिशतले बढ्यो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > सानिमा बैंकको खुद नाफा ३०.७५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात ३०.७५ प्रतिशले धेरै हो। गत वर्षको चैत मसान्तमा बैंकले एक अर्ब २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
सानिमाले चैत मसान्तसम्म खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा पनि राम्रो वृद्धि गरेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी यस अवधिमा ३९.४७ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष सानिमाले २ अर्ब ९ करोड ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
साथै, सञ्चालन नाफा पनि २९.१० प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब २४ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७३ करोड ३० लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । चैत मसान्त सम्म सानिमाको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने १ अर्ब ११ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषको आकार यस अवधिमा २७.१९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ९ करोड ८७ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष जगेडा कोषमा १ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
सानिमाले प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ३१ पैसाले बढाए २६ रुपैयाँ ५२ पैसा पुर्याएको छ । गत वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष २० रुपैयाँ २१ पैसा थियो । बैंकको प्रतिसेयर नटवर्थ भने १४० रुपैयाँ ३२ पैसा छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिको वितरणयोग्य नाफाको अनुसार बैंकले शेयरधनीलाई १८.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्दछ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा अवधिमा बैंकको निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानीको विस्तार उच्च छ । समीक्षा अवधिमा ९ प्रतिशतले बचत संकलन बढाएको बैंकको कर्जा लगानी १७ प्रतिशत धेरै बढेको छ। तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ८५ अर्ब २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ७९ अर्ब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । कर्जा विस्तार उच्च वृद्धिले बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.५८ प्रतिशतमा बढेको छ ।
२०७६ वैशाख १२ गते ११:३३ मा प्रकाशित
आगामी २० महिना भित्र पुनर्निर्माण सकिन्छ : प्रम ओली
सरकारद्वारा २० सह-सचिवको दरबन्दी थप, यी १९ जिल्लामा सिडियोको नेतृत्व गर्ने
पशुपतिको भूउपयोगसहित गुरुयोजना
दशैंमा पोखरा, भैरहवा र सिमराका यात्रुलाई राहत, एनएसीको उडान सुरु !
एकैपटकमा हेर्नुहोस् ! ४० जिल्लाका प्रावि तहको प्रकाशित अन्तिम नतिजा